“प्रचण्ड माथिको यति ठूलो, ख,तरा टर्यो, के हुन् ति कारण ? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“प्रचण्ड माथिको यति ठूलो, ख,तरा टर्यो, के हुन् ति कारण ?
“काठमाडौ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माथिको ठूलो समस्या टरेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वैधानिकता कायम रहने निर्णय गरे पछि उनी माथिको ठूलो खतरा टरेको हो । एमाले प्रवेश गरेका पूर्व माओवादीका नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा माओवादी पार्टी नै विघटनको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।”
“तर निर्वाचन आयोगले उनीहरुको माग अवैधानिक भनेको छ । एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साहलगायतको योजनामा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले असार २३ मा दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ ।”
“माओवादी छाडेर एमालेमा लागेका टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरी लगायतले माओवादी पार्टी अवैधानिक भइसकेको भन्दै खारेजीको माग राखेका थिए । आफुहरुको सांसद पद खोस्ने पार्टीको निर्णय पनि अवैधानिक भएको उनीहरुको तर्क थियो ।”
“​प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्तहरु सगुनसमशेर जबरा, जानकी कुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरी प्रसाद पौड्यालको संयुक्त बैठकले आइतबार प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्णय गरेको हो ।”
Previous “बामदेव गौतम,ले राखे माग, ‘राष्ट्रिय सभाका,सांसद पनि प्रधानमन्त्री, बन्न पाउनुपर्छ’
Next “निर्वाचन आयोगले भन्यो : नेकपा (माओवादी केन्द्र) वैधानिक, बादल–टोपबहादुरहरुको निवेदन खारेज”